नेपालीलाई मृयुसँग खेलाउने गाडी बेच्ने कम्पनीले नेपालीलाई परेको बेला बचाउने सशस्त्र प्रहरीको टोलीलाई दियो जर्शी !
ARCHIVE, COVER STORY » नेपालीलाई मृयुसँग खेलाउने गाडी बेच्ने कम्पनीले नेपालीलाई परेको बेला बचाउने सशस्त्र प्रहरीको टोलीलाई दियो जर्शी !
काठमाडौँ - भारतमा असुरक्षित भनिएका गाडी नेपालमा धमाधम बेच्ने कम्पनी अग्नी इन्कर्पोरेटेडले एपिएफलाई जर्सी प्रदान गरेको छ । एपिएफ क्लबको फूटबल खेल प्रवद्र्धन गर्दै आएको उक्त कम्पनीले क्लबलाई जर्सी उपलब्ध गराएको हो ।
एक कार्यक्रमका बीच अग्नि ग्रुपका अर्जुन शर्माले एपिएफ प्रमुख सिंहबहादुर श्रेष्ठलाई आगामी सिजनको लागि आवश्यक पर्ने जम्मा १ हजार १ सय २८ थान जर्सी प्रदान गरेका छन् । जनता ठगेको आरोप लागेको उक्त कम्पनीले अग्नि ग्रुपले उक्त टिमलाई ५ वर्षको लागि प्रायोजन गरेको छ ।